प्रधानमन्त्रीको क्षमा याचना « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रधानमन्त्रीको क्षमा याचना
दाजुभाइ तथा दिदीबैनीहरू,
भन्देखिनलाई अरूले त हनिमुन मनाउँन पाउँछन् । मैले त महिना दिन नबित्दै विवाद, आलोचना र व्यंग्य पात्र बन्नुपरेकोमा अन्त्यन्तै झ्वाँक चलेको छ । मैले झ्वाँक भन्न खोजेको हो, फेरि च्वाँक सुन्नुहोला नि ! किन त भनेर भन्दाखेरि न भन्ने साझा सवाल, गर्ने व्यक्तिगत सवाल ! यस्तोमा तपाईंलाई झ्वाँक चल्छ कि चल्दैन ?
म सबै दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता मसिना कुरा बिर्सनुपर्छ । किनभने योभन्दा कडा कुरा आउनै बाँकी छ । सामान्य भनाभनलाई त यत्रो ठूलो बनाएको छ, झन् कुटाकुट नै भयो भने कस्तो–कस्तो प्रतिक्रिया आउला ? त्यो बेलाका लागि पनि शब्दहरू सञ्चित राख्नुपर्छ । त्यसैले साझा सवालको प्रसंगलाई यहीं रोक्न अनुरोध गर्छु ।
यसै पनि ग्लोबल वार्मिङले विश्व तातिरहेको छ । त्यसको असर पर्ने नै भयो । त्यसमाथि चुनावको नतिजाले सेल्फ वार्मिङ बढिरहेको छ । सोर्स फोर्सको वार्मिङले फेमिली वार्मिङ भएको भयै छ । यस्तो बेला अक्सफोर्डको कुरा झिक्दा मान्छे तातिंदैन त ? त्यसैले जे भयो, त्यसलाई यही अन्त्य गर्नोस् ।
गत साता साझा सवाल नामको कार्यक्रममा भन्देखिनलाई जे घटना भयो, त्यो अन्यन्तै दु:खद छ । त्यही दु:खद् कार्यक्रम अप्रत्याशित रूपमा चर्चित पनि हुन पुग्यो । मलाई पनि झनक्क रिसाउने इच्छा त थिएन, तर रिस भन्ने कुरा आफ्नो वशमा नहुँदो रहेछ, फ्याट्टै रिसाइहालिएछ ।
बिहान आरजुसँग पनि भन्देखिनलाई सामान्य ठाकठुक परेको थियो । साझा सवालमा मलाई जाने रहर पनि थिएन, कर पनि थिएन तर क–कसले जाँदा राम्रो हुन्छ भने । आरजुले जानैपर्छ भनिन्, गएँ । अघिल्लो बेलुका अलि लामो समयसम्म बसिएछ । भो भन्दा पनि थपेको थप्यै गरिन् । बेलुकाको ह्याङ पनि थियो ।
कार्यक्रममा त्यो भाइले अलि बड्ता नै बोल्या हो हुनलाई । मैले पनि अलि कम बोल्द्या भए हुन्थ्यो । दुवै जना सिंह राशिको परिएछ, परिहाल्यो । त्यो केटाको अनुहार पनि, के नाम रे त्यसको ? ढकाल । मान्छे त काल नै रहेछ । अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजको कुरा गर्न थाल्यो । लन्डन बस्दा एकपटक घुम्न गएको थिएँ, त्यही याद आएर झनक्क झन्किइहालेछु ।
यो कस्तो भयो भने, अरूलाई ओरालो लाग्दा मृगले लखेट्छ, मलाई मिडियाले लखेटेको पनि हो । किन भन्देखिनलाई जसलाई बोल्न अप्ठेरो हुन्छ त्यसैलाई किन बोलाउनु ? मेरो साटो आरजु गएकी भए पनि हुन्थ्यो । उनी पनि छायाँ प्रधानमन्त्री हुन् । सल्लाहकारले कस्तो सल्लाह दिएका हुन्, यसमा घोर ग्रान्ड डिजाइन देख्छु ।
सामाजिक सञ्जालमा गाली गरिरा’छ । मैले त त्यो एउटालाई मात्र गाली गरेको हो । कुन काल रे ?
सल्लाहकार : ढकाल हजुर ।
अँ, ढकाल । मेरो एउटा साथी थियो, ढकाल । उसलाई सबैले चौथो काल भन्थे । चौथो काल किन भने पहिलो भूतकाल, दोस्रो भविष्यत्काल, तेस्रो वर्तमान काल, चौथो ढकाल । ढकालबाट जोगिनु भन्थे, जोगिनै पाइएन ।
प्रधानमन्त्रीको बोली भएन भन्ने कुरो पनि आएको छ भन्देखिन्लाई । मसँग भएको बोली यही हो । अर्को कहाँबाट ल्याउनु बोली ? ऊ केपी ओलीको बोली मैलाको जस्तो छ । प्रचण्डको सफाको जस्तो छ । बाबुरामको बच्चाको जस्तो छ, माधवको माउको जस्तो छ । सबै जनाको एउटै स्वर भयो भने त
हुँदै भएन नि ।
प्रधान न्यायाधीशको विषयमा प्रस्ट जवाफ आएन भन्ने कुरो छ । यही क्षमा कार्यक्रममार्फत् प्रस्ट पार्न चाहन्छु, तिमी काले म पनि काले, काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भएकै हो । देशले पढेका प्रधानमन्त्री कहिले पाउँछ भन्ने प्रश्नमा जहिले पढेका जनता मतदाता भएर आउँछन्, त्यही दिन देशले पढेका प्रधानमन्त्री पाउँछ ।
अरू कुरो मलाई थाहा छैन । थाहा भए पनि भन्न मिल्दैन । मिले पनि भन्दिनँ । जबर्जस्ती गर्न पाइन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा तपाईंहरू बढ्ता हुँदै हुनुहुन्छ । मलाई थाहा छैन र ? तपाईंहरू निहुँ खोज्दै हुनुहुन्छ । खुरुक्क क्षमा दिनोस्, हैन भने मैले पनि जानेको छ- जय नेपाल ।